Angry Birds Blast, famoahana piozila vaovao an'i Rovio | Vaovao IPhone
Angry Birds Blast, fanombohana toy ny piozila an'i Rovio
Nahita ireo vorona sosotra ve ianao? Tsara vintana ianao: nanomboka i Rovio Angry birds blast, lalao vaovao iray ahitana ireo maherifo ireo vorona tezitra ireo izay ny fahavalony dia kisoa maintso izay nitana andraikitra ara-tantara nahatonga ny fiainany ho tsy azo tanterahina (na dia toa ny kisoa aza no tena iharan'ireny tantara ireny). Lalao inona izany? Eny, lazaiko fa ankamantatra na lalao "Candy Crush type" io.
Azontsika atao ny milaza fa efa misy ny zava-drehetra avy amin'ny Angry Birds, saingy, ahitsiho aho raha diso aho, tsy nisy na iray aza tsy nila manambatra loko maromaro hahatratra ny tanjontsika. Rehefa avy namaky ireo teny teo aloha, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny lalao toy ny Candy Crush malaza. Ny Angry Birds Blast dia misy itovizany, toy ny hoe tsy maintsy manapoaka vovoka (misy vorona) mitovy loko isika, na dia misy fahasamihafana mazava aza: amin'ny lohateny Rovio farany dia tsy maintsy ataontsika ny mikitikitika ny bubble iray izay mitovy loko eo akaikiny, izay tsy mitovy amin'ny famindrana azy ireo hifanaraka ary hipoaka ho azy.
Angry Birds Blast, lalao «Candy Crush-type» vaovao an'i Rovio
Araka ny efa nampoizina, ny lohahevitra rehetra amin'ity lalao ity dia toa mahazatra antsika, ary betsaka. Ireo mpihetsiketsika ny Angry Birds Blast no vorona pissed-off izay niaraka taminay nanomboka tamin'ny 2009, raha ny kisoa ny fahavalo izay efa fantatsika tamin'io taona io ihany. Amin'ny lafiny iray, azoko fa tsy misy olona te hamono ny gisa mametraka ny atody volamena, fa ny tenako manokana dia tsy te hararaotina loatra ny lohahevitra iray satria raha ny hevitro dia mandreraka izany.
Ny Angry Birds Blast dia manana ambaratonga 250 ary hisy ny fanamby isan'andro, izay hampirisika ny mpilalao azy tsy hanakana ny filalaovana Angry Birds farany ary, manasongadina azy ireo, hanasa azy ireo hanao micropayments, satria io dia lalao maimaim-poana miaraka amin'ny fividianana fampiharana. Izaho manokana dia tsy dia faly amin'ny famotsorana ity. Ary ianao?
Angry birds blastmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Angry Birds Blast, fanombohana toy ny piozila an'i Rovio
Misaotra fa hanandrana aho.
Nihena ny Google Pixel noho ny olana mitohy
Ny iPad 2017 dia mety hahemotra noho ny tsy fisian'ny processeur 10nm